राणाको उद्घोष- आन्दोलनबाटै राजसंस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौं, कसैले रोक्न सक्दैन (भिडियो) « Swadesh Nepal
राणाको उद्घोष- आन्दोलनबाटै राजसंस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौं, कसैले रोक्न सक्दैन (भिडियो)
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७६, बुधबार
सबै नेपालीहरु तिहारको रमझममा रमाई रहेकाबेला केही शक्ति भने राजनीतिक व्यवस्था नै उल्ट्याउने खेलमा लागेका छन् । यसका लागि दुई वर्ष अघि गठन भएको ‘ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धन’ (एनडीए ) लाई अझ सक्रिय बनाइ गणतान्त्रिक व्यवस्था नै उल्ट्याउने उनीहरुको योजना छ ।
गठवन्धनको प्रमुख संयोजक किशोरी महतो रहेका छन् भने संयोजकमा प्रदीपशम्शेर राणा छन् । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादी पशुपतिशम्शेर राणासंग एकतामा गएपछि राणा असन्तुष्ट थिए । उनी अझैपनि राप्रपा राष्ट्रवादीमै छन् । उनी राणासहितको समूह र महतोको समूहले प्रजातान्त्रिक विचारधार भएका देशभरका शक्तिलाई एउटै छातामुनी केन्द्रीकृत गर्न गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् ।
संयोजक राणा भन्छन्, ‘ अहिले हामी आन्तरिक छलफल र योजना बनाउनमा व्यस्त छौं । तिहार लगत्तै काठमाडौंका बिभिन्न स्थामा हाम्रो कोणसभा हुन्छ । यसको उद्देश्य भनेको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको अपरिहार्यताबारे जनतालाई बुझाउनु हुनेछ । त्यसपछि देशका बिभिन्न स्थानमा हामी शक्ति प्रदर्शन गछौै । काठमाडौंमा हजारौं मानिस उतारेर यसको सुरुवात हुनेछ । ’
‘मुलुकमा राजसंस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नभए मुलुक नै नरहन सक्छ । यी गणतन्त्रवादीहरुले मुलुकलाई विदेशीको क्रिडास्थल बनाए । आफू पनि विदेशीको इशारामा चल्न थाले । मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पुगेपछि बाध्य भएर यीनको विरोधमा सडकमा आउनुपर्ने स्थिति भयो । अब जनताले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मुलुकको हीतमा छैन भन्ने बुझिसकेका छन् । गणतन्त्र पक्षधर नेताहरुले गरेका कामबारे समेत उनीहरु जानकार भैसके । हुँदाहुँदा अपराधिक क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालिसके । सभामुख, सांसद्हरु पक्राउ परे । आफैले ल्याएको व्यवस्था संरक्षण गर्ने नैतिकता र कर्तव्यबोधसमेत देखाउन सकेनन् । यसको निष्कर्ष भनेको यो ०७२ सालमा ल्याएको संविधान हटाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अब त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्छ । ’ राणाको दावी छ ।
मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने कुरा आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छ । हिजो आन्दोलनको बाहानामा धोकाधडी शैलीमा राजालाई फालियो । विदेशीको इशारामा धर्म फालियो । अब आन्दोलनबाटै यी कमजोरी सच्याउनु पर्दछ । यसका लागि कांग्रेस, नेकपा, मधेशी दलहरु, राप्रपा भित्रका सबै देशभक्त नेताहरु एकजुट हुनुपर्दछ ।
जहाँसम्म राजसंस्थाको कुरा छ यसका लागि राजावादी शक्तिहरु नै खतराको रुपमा देखिएका छन् । कुनैपनि हालतमा कमल थापा, पशुपतिशम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी राजावादी हुन सक्दैनन् । यीनीहरुले पद र भोटका लागि राजाको मुद्दा बोकेका हुन । आफूलाई जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतै लहसिने यीनीहरुको चरित्र विगतमा प्रमाणित भैसक्यो । यीनीहरुले बोकेको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा भोटका लागि मात्र हो ।